"Casa Ardilla" enegadi, ikhitshi kunye negumbi lokuhlambela labucala - I-Airbnb
"Casa Ardilla" enegadi, ikhitshi kunye negumbi lokuhlambela labucala
Santa Catalina, Provincia de Veraguas, Panama
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguRoberta
I-90% yeendwendwe zakutshanje inike uRoberta iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
"CASA ARDILLA" Yindlu entywiliselwe eluhlaza, ibanzi kakhulu kwaye yonke yenziwe ngamaplanga. Ukuzola kwayo kunye nokunxibelelana kwayo nendalo kuyenza ibe yodwa.
Indlu ikwindlela ekukuphela kwayo eya "La Punta" eSanta Catalina, yimizuzu nje emi-3 yokuhamba. Kufutshane kakhulu nendlu kukho ukutya kwiindawo zokutyela ezininzi kwaye wonwabele i-ayisikrimu emnandi kwindawo "La Moncheria" ice cream parlor. Indlu inegumbi layo lokuhlambela elineshawa eshushu, ikhitshi elikhulu elinezixhobo kunye nebalcony ekhethekileyo.
Indlu yakhiwe ngamaplanga ngokupheleleyo, yonke into yenziwe ngesandla kwaye banayo yonke into oyifunayo ukuze uchithe indawo yokuhlala yendalo ephezulu kunye nokuphumla okuphezulu. Umyezo okhoyo kwindlu wenza ukuba ube yindawo epholileyo kunye neyokuphumla emva kosuku olunzima kumaza okanye uhambo oluhle kwiSiqithi saseCoiba. Kananjalo indawo yendlu unelungelo kakhulu ekubeni kwimizuzu emi-2 kuphela ukusuka 'La Punta "leyo yindawo apho ilungelo kakuhle zonke breaks Central America nokuthe tye phakathi phakathi kumbindi wedolophu kunye Estero beach..
4.81 out of 5 stars from 126 reviews
4.81 · Izimvo eziyi-126
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi126
Kufuphi nendlu, ngaphandle kweArtisan Gelateria yethu emnandi, unokufumana iindawo zokutyela apho ungatya khona ukutya kwaselwandle kunye ne-pasta, kukwakho nepizzeria kunye neendawo zokungcebeleka ezininzi ezinechibi apho unokuchitha khona imini, iibhari ze-cocktail njl.
Umbuki zindwendwe ngu- Roberta
Soy una chica muy alegre, me gusta mucho viajar.
Soy fotografa y me encanta la fotografia de viajes y hacer reportajes, capturar la vida en su estado puro, sin pose ni mentiras.
Me encanta el silencio y el contacto con la naturaleza. Disfruto mucho leyendo, aprendiendo nuevas cosas, comiendo rico y haciendo yoga.
Soy fotografa y me encanta la fotografia de viajes y hacer reportajes, capturar la vida en su estado puro, sin pose ni mentir…
Siya kuhamba imizuzu emi-2 ukusuka endlwini, sinendawo encinci ye-ayisikrimu apho senza i-ayisikrimu yasekhaya yonke imihla, ngoko unokusifumana khona nantoni na.